Building a Simple Contact Form with Bootstrap & PHP – Somali Virtual Academy
Koorsadaan waxaan ku baran doonnaa sida loo dhiso foomka lays kala soo xiriiro ee loo yaqaano “Contact Forms” kaasoo badanaa aan ku aragno website-yada dynamic-ga ah.
Inta ay socoto koorsadaan, waxaan dhisi doonnaa contact form loo isticmaali karo website kasta ee ku dhisan PHP.
Waxaan ku dhisi doonnaa foomkeena technologies-ka kala ah Bootstrap oo ah CSS Framework & PHP oo iyadana ah Server side scripting language.
Waxaan ku bari doonnaa hanaanka loo maro dhisida contact form-ka si aad ugu darsato code-ka koorsadaan website-kaada ku dhisan Bootstrap & PHP, ama aad kororsato aqoontaada, sidaas daraadeed isku diiwaan geli koorsadaan si aad website-kaada ugu sameyso contact form shaqeenaya ama aad u kororsato xirfadaan.
Maxaa leygaga baahan yahay?
Kombiyuutar (PC ama MAC)
Local Server / Hosting Package with FTP
Faham guud oo HTML-ka ah.
Faham guud oo Bootstrap ah inkastoo aan sharxi doonno qeybta ku saabsan contact form-ka.
Faham guud oo PHP ah
Maxaan ka heli doonaa markey ii dhamaato koorsadaan?
Xirfada lagu dhiso contact forms-ka PHP
Inaad barato sida loogu dhiso foomiska Bootstrap
Ardayda jecel inay bartaan sida loo dhiso Contact Forms-ka
Dadka web developers-ka ee ay ka maqan tahay xirfadan
Ardayda jecel inay kororsadaan xirfad cusub
What We Are Going To Build FREE 00:11:00
Prerequisites FREE 00:02:00
Downloading Exercise files 00:00:00
Section 2: Gathering Required Tools
Downloading Bootstrap 00:02:00
Downloading jQuery 00:04:00
Downloading and Installing Notepad++ 00:03:00
Downloading XAMPP 00:03:00
Section 3: Building the User Interface with Bootstrap
Creating Project File Structure 00:03:00
Importing Basic Bootstrap Template 00:06:00
Building Section 00:06:00
Building the Form – Part 1 00:09:00
Building the Form – Part 2 00:10:00
Section 4: Applying Validation to our Form
Applying Validation to our Form 00:20:00
Declaring Local Variables to Store Submitted Data 00:12:00
Checking if there is an Error 00:06:00
Styling Alerts 00:12:00
Applying Sticky Form Fields 00:12:00
Section 5: Sending and Testing Email
Sending Email with Mail function 00:05:00
Setting up Mail Server 00:06:00
Clearing Input Fields 00:06:00
Recap What We Have Learned So Far 00:13:00
Good Bye 00:01:00
C/raxmaan Max'ed Diiriye12/October/2016 at 5:53 pmLog in to Reply
Koorso Qeyb Cayiman taabaneysa
Waa koorso aad u fiican oo qeyb cayiman taabaneysa, waxayna ku bareysaa oo kaliya sidaad u baran lahayd sida loo dhiso contact us form-ka, waa koorso aan aad ula dhacay.
Maxamed Yuusuf Nuur3/November/2016 at 4:13 pmLog in to Reply
Koorso Cajiib ah
Waa koorso aad u qiimo badan oo aan wax badan ka faa’idey.